OPPO F11: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Eder Ferreno | | Android Android, Finday
Ny OPPO F11 Pro Tsy vao tamin'ity tranga ity ihany no nahatongavany, satria tamin'ny hetsika fampisehoana nataony tany India ny marika dia nilaza taminay ny maodely hafa. Momba ny OPPO F11 ity, izay azontsika faritana toy ny kinova maotina amin'ny fitaovana teo aloha. Na dia eo amin'ny lafiny famaritana aza tsy dia misy fiovana be loatra. Izay ananantsika fanovana kely dia eo amin'ny endriny.
Satria io OPPO F11 io dia tsy mampiasa fakantsary mihetsika izay efa hitantsika tao amin'ny maodelin'ny Pro. Amin'ity fitaovana ity, ny marika sinoa dia nanao fampiasana notch amin'ny endrika rano indray mitete eo amin'ny efijeryo, izay manome endrika azy ankehitriny kokoa, mitovy amin'ny telefaona hafa eny an-tsena amin'ny Android.
Amin'ny sehatra teknika, mizara ampahany lehibe amin'ny singa mitovy amin'ny maodely hafa izy, toy ny processeur na fakan-tsary. Noho izany, aseho azy ho safidy mahaliana iray hafa ao anatin'ny elanelam-potoana Android, raha sanatria hivoaka any Espana io fotoana io amin'ny volana ho avy.
1 Famaritana OPPO F11
Famaritana OPPO F11
Toy ny maodely hafa dia efa tonga miaraka amin'ny kinova vaovao an'ny sosona fanaingoana OPPO, izay havoaka amin'ny sisa amin'ny maodelin'ny marika mandritra ity volana martsa ity. Afaka hitantsika izany OPPO F11 dia aseho ho telefaona antonony mahaliana tokoa. Noho izany, mety ho lasa malaza eo amin'ny tsena izany amin'ny volana ho avy. Ireto ny fiparitany:
efijery: LCD LTPS 6,53-inch miaraka amina Full HD + vahaolana (2.340 x 1.080)
Fakan-tsary Rear: MP 48 misy vavahady f / 1.8 ary 5 MP manana zana-kazo f / 2.4
Fakan-tsary eo aloha: MP 16 miaraka amin'ny vava f / 2.0
Rafitra fandidiana: Android Pie miaraka amin'ny ColorOS 6
bateria: 4.020 mAh misy fiampangana haingana an'ny Super VOOC
Conectividad: 4G LTE, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.2, GPS GLONASS ary USB karazana C
ny hafa: Fitaovana fantsom-pifandraisana, NFC,
lafiny: 161,3 x 76,1 x 8,8 mm
lanja: 190 grama
Tsy mahalala na inona na inona izahay momba ny fanapaha-kevitra hampiasa notch amin'ity fitaovana ity. Mahagaga ity zava-misy ity, satria iray amin'ny lafiny vitsivitsy manasaraka ireo fitaovana roa ireo. Saingy mety misy ny mpanjifa aleony manana telefaona misy ilay notch voalaza etsy ambony amin'ny endrika rano mitete eo amin'ny efijery. Raha tsy izany dia mijanona ho manify kely eo amin'ny fitaovana ny zana-kazo.
Ny fakantsary dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo lafiny matanjaka indrindra amin'ity maodely ity, miaraka amin'ny 48 MP an'ny sensor lehibe, miaraka amin'ny sensor faharoa izay manana 5 MP. Antenaina hiasa tsara izy ireo, hahafahany maka sary tsara amin'ny toe-javatra isan-karazany. Azo inoana fa izy io koa dia hanasongadinana zoom optika 10x an'ny marika. Ny fakantsary eo aloha dia mitovy amin'ny maodely Pro, io ihany no ao amin'ity OPPO F11 ity dia eo amin'ny toeran'ny telefaona no misy azy. Ao anatin'io koa no ahazoantsika ny fanekena ny tarehy. Ny faran'ny sensor dia hita eo aorinan'ny telefaona.
Ho an'ny ambiny, mahita ny tenantsika indray isika miaraka amin'ny bateria lehibe, izay mampanantena fahaleovan-tena tsara. Mikasika ny rafitra fiasa, tonga fitsipika miaraka amin'ny Android Pie, miampy ny kinova fanavaozana an'ny OPPO izay farany. Tsy misy fiovana amin'ity lafiny ity raha oharina amin'ilay maodely hafa.
India no ho aleha voalohany amin'ity OPPO F11 ity, izay hamoahana azy tsy ho ela. Izy io dia manana fitambarana RAM sy fitehirizana tsy manam-paharoa, raha ny loko roa amidy dia mitovy amin'ny an'ny maodely hafa, samy manana ny vokany gradient ho lamaody. Any India dia hanana mari-pahaizana mitentina 19.990 250 ropia, izay eo amin'ny XNUMX euro eo ho eo ny tahan'ny fifanakalozana.
Amin'ny lafiny iray, tsy mahalala na inona na inona izahay momba ny fandefasana azy amin'ny tsena hafa. Ny zavatra lojika dia ny hoe aorian'ny India dia tonga amin'ny tsena hafa any Azia, alohan'ny hidirany any Eropa. Fa manantena izahay ny hahafantatra bebe kokoa momba ity fandefasana azy any Eropa ity amin'ny telefaona roa, raha mitranga izany amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Android Android » OPPO F11: Ny kinova kely an'ny F11 Pro